mpanao mari-trano trano
-Trano angovo mahomby
trano efa voarafitra mialoha
ECO rafitra HOUSE
Tadiavo ny katalaogy trano izao!
Trano vita rindra CONCEPT-M 159 Bad Vilbel
Villa amin'ny trano fanorenan'i Bauhaus
Trano vita an-tanàna maoderina miaraka amin'ny varavarankely fitodian-drano sy tafo fantsona
Ny trano vaovaon'ny tanàna maoderina misy carport, fanitarana baravarankely sy tafo hantsana mahazatra dia trano iray voageja avy amin'ny mpamatsy trano efa vita. WeberHaus. Manodidina ny 190 metatra toradroa izany
Villa manankarena maoderina amin'ny fomba anglisy
Ny villa prefab villa amin'ny fomba anglisy any amin'ny firenena anglisy dia trano volavolan-tena nomanina miaraka amina tranobe vita amin'ny tafo sy gara indroa avy amin'ny mpamatsy. WeberHaus, Miaraka amin'i 640
Trano koba maoderina San Pedro misy tafo ambany
Ny Kubus Haus San Pedro maoderina miaraka amina tranom-bolo fisaka sy rindrambaiko plastika amin'ny fomba Bauhaus dia trano maharitra vita amin'ny GUSSEK HAUS. Kianja
Villa tanàna maoderina Melina misy tafo sy fefy galera
Ilay villa tanàn-dehibe vaovao Melina miaraka amina tampon-trano sy rindrambaiko vita amin'ny hazo plastika dia trano vita amin'ny maoderina avy amin'ny mpamatsy GUSSEK HAUS. Ilay trano nihemotra vita amin'ny alàlan'ny kianja
Bungalow Piedmont maoderina misy tafo sy garage
Ny trano tsara tarehy vita Bungalow Piemont miaraka amina garazy sy firafitry ny tafio-trano amin'ny endrika Bauhaus dia trano manokana natao GUSSEK. Ny drafitry ny gorodona malalaka dia eo amin'ny haavony
Villa villa Baggio misy tafo kambana
Ny villa vaovao ao an-tanàna Baggio miaraka amina tranom-borona vita amin'ny tafo, garazy ary clinker plaster facade dia trano lehibe iray avy amin'ny mpanamboatra trano vita mialoha GUSSEK HAUS. Trano tokana mianadahy
Trano tokana fianakaviana mitokana BALAKA 146 misy tafo mitoby
Ny tranon'ny tafo maoderina BALANA 146 avy amin'ny mpanamboatra trano vita dia Bien-Zenker dia mety ho an'ny sombin-tany tery. Ny drafitry ny rihana an'ny tranon'ny fianakaviana dia manana efitrano 5 sy manodidina
Trano vita an-trano maoderina misy tafo fisaka amin'ny fomba Bauhaus
Ny tranon'ny fianakaviana tokana misy ny trano misy ny tafo maoderina amin'ny fomba Bauhaus dia tranobe maritrano voalamina malalaka avy amin'ny mpanamboatra trano efa vita mialoha. WeberHaus. Ny drafitra malalaka amin'ny rihana trano dia 6
Single Family (570)
Apartment trano (3)
Fianakaviana roa trano (50)
fisian'ny / Disclaimer / Privacy